Zawhtut - Yangon, 17, Myanmar (112 books)
89 ratings (4.08 avg)
This will prevent Zawhtut from sending you messages, friend request or from viewing your profile. They will not be notified. Comments on discussion boards from them will be hidden by default.
Sign in to Goodreads to learn more about Zawhtut.
Zawhtut’s favorite books
Zawhtut is Currently Reading
Zawhtut said: " ဘာရယလို တောမဟုတဘူး။ The Wall ဆိုတော Game of Thrones ထဲက The Wall ကို မကစိထဲမြငလာလို ဖတကြညဦးမယလို စဥးစားတာ။ Others ဆိုတာကလညး Wildling တွေ လို စိတထဲပုံပေါ်လာလို ။ Manbooker longlist ထဲပါတယဆိုတော ကောငးမယထငပါတယ။ ဘာရယ်လို့ တော့မဟုတ်ဘူး။ The Wall ဆိုတော့ Game of Thrones ထဲက The Wall ကို မျက်စိထဲမြင်လာလို့ဖတ်ကြည့်ဦးမယ်လို့ စဉ်းစားတာ။ Others ဆိုတာကလည်း Wildling တွေ လို စိတ်ထဲပုံပေါ်လာလို့ ။ Manbooker longlist ထဲပါတယ်ဆိုတော့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ...more "
(page0of 254)
— Aug 10, 2019 12:37PM
Aug 10, 2019 12:42PM · see review
Power of Motivation: How to Succeed in All Circumstances
See all7books that Zawhtut is reading…
Zawhtut’s Recent Updates
Zawhtut has read
Nov 25, 2019 10:58PM ·2likes · like · preview book
Zawhtut ratedabook it was amazing
ဒီလောက ဆိုးရွားတဲ စုတပြတသွားတဲ လူသားတစယောကရဲ အခြေအနေကို ဖတရတာကောငးအောင ရေးပြသွားတာ အံသြဖို ကောငးပါတယ။ လူတွေအတွက အသုံးမဝငတောလို အသတခံရတဲ ခွေးတစကောငရဲ အရှကမဲစာ သေရပုံ နဲ ကောလိပပရောဖကဆာ တစယောကရဲ human condition ကို ယှဥပြီးရေးထားတယ။ Divine ဒီလောက် ဆိုးရွားတဲ့ စုတ်ပြတ်သွားတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကို ဖတ်ရတာကောင်းအောင် ရေးပြသွားတာ အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လူတွေအတွက် အသုံးမဝင်တော့လို့အသတ်ခံရတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အရှက်မဲ့စာ သေရပုံ နဲ့ကောလိပ်ပရောဖက်ဆာ တစ်ယောက်ရဲ့human condition ကို ယှဉ်ပြီးရေးထားတယ်။ Divine retribution ကို ယုံသလား။ ဘဝ ရဲ့မာန် ဆိုတာဘာလဲ။ အစရှိသဖြင့် လေ့လာချက်တွေကို ဝတ္တ္တုသဖွယ် အသွင်ယူပြီး စာဖတ်သူကို ဝတ္တ္တုအဆုံး အထိဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။
တော်ကောင်းမင်း ဘာသာပြန်တာ အချိတ်အဆက် အရမ်းမိပြီး ကျစ်လစ်တယ်။ ဘာသာပြန်ဆရာတွေထဲမှာ ထွန်းပေါက်ပြီး ကျန်နေခဲ့မယ့် ဆရာတစ်ယောက် လို့မြင်မိပါတယ်။ မြန်မာစာဖတ်သူတွေကို J M Coetzee နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ...more
Sep 29, 2019 05:40AM · like · see review · preview book
Zawhtut ratedabook liked it
ဇာတလမးကို ဇာတကွကသုံးမိုးနဲရေးထားတယ။ အခိနပေးရတာ တနပါတယ။ နောကဆုံးအဖြစအပြကက အခရာကပြီး ဂွနစတိနးဘတ ဆနပါတယ။ ထငလငးဘာသာပြနတာပဲထောကတာလား၊ သူနဂိုအရေးအသားကြောငပဲလားတောမသိ တခြား မောငထွနးသူ ပြနတာတွေလောက သဘောမကမိပါ။ ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်ကွက်သုံးမျိုးနဲ့ရေးထားတယ်။ အချိန်ပေးရတာ တန်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြစ်အပြက်က အခရာကျပြီး ဂျွန်စတိန်းဘတ် ဆန်ပါတယ်။ ထင်လင်းဘာသာပြန်တာပဲထောက်တာလား၊ သူ့နဂိုအရေးအသားကြောင့်ပဲလားတော့မသိ တခြား မောင်ထွန်းသူ ပြန်တာတွေလောက် သဘောမကျမိပါ။ ...more
Sep 28, 2019 02:27AM · like · see review
ဘာရယလို တောမဟုတဘူး။ The Wall ဆိုတော Game of Thrones ထဲက The Wall ကို မကစိထဲမြငလာလို ဖတကြညဦးမယလို စဥးစားတာ။ Others ဆိုတာကလညး Wildling တွေ လို စိတထဲပုံပေါ်လာလို ။ Manbooker longlist ထဲပါတယဆိုတော ကောငးမယထငပါတယ။ ဘာရယ်လို့ တော့မဟုတ်ဘူး။ The Wall ဆိုတော့ Game of Thrones ထဲက The Wall ကို မျက်စိထဲမြင်လာလို့ဖတ်ကြည့်ဦးမယ်လို့ စဉ်းစားတာ။ Others ဆိုတာကလည်း Wildling တွေ လို စိတ်ထဲပုံပေါ်လာလို့ ။ Manbooker longlist ထဲပါတယ်ဆိုတော့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ...more
Aug 10, 2019 12:43PM · like · see review · preview book
We’d love your help. Let us know what’s wrong with this preview of The Wall by John Lanchester.
Preview — The Wall by John Lanchester
Zawhtut is starting The Wall
Aug 10, 2019 12:37PM · like · see status · preview book
Zawhtut marked as did-not-finished
Aug 10, 2019 12:34PM ·2likes · like · preview book
Aug 10, 2019 12:34PM · like
Zawhtut wants to read 20 books in the 2019 Reading Challenge
He has read2books toward his goal of 20 books.
Aug 10, 2019 12:33PM · like · view books
Aug 10, 2019 12:32PM · like · preview book
ရိုးအတဲ လူငယ လယသမားလေး မှာ Chi ဆိုတဲ Guardian Spirit ရှိတယ။ Chi က သူ အထကက ဘုရား နဲ နတမားကို လယသမားလေး အကြောငးကို တငပြနေပုံ ရေးသားထားတယ။ စာရေးပုံဆနးပြီး ဖတရတာမခကဘူး။ နတဘုရားနာမည တွေကတော မားလို မှတစရာလို မယမထငပါဘူး။
လယသမားလေး တစနေ မြို ပေါ်က စေးမှာ ကြက ရိုးအတဲ့ လူငယ် လယ်သမားလေး မှာ Chi ဆိုတဲ့ Guardian Spirit ရှိတယ်။ Chi က သူ့ အထက်က ဘုရား နဲ့နတ်များကို လယ်သမားလေး အကြောင်းကို တင်ပြနေပုံ ရေးသားထားတယ်။ စာရေးပုံဆန်းပြီး ဖတ်ရတာမခက်ဘူး။ နတ်ဘုရားနာမည် တွေကတော့ များလို့မှတ်စရာလို မယ်မထင်ပါဘူး။
လယ်သမားလေး တစ်နေ့ မြို့ ပေါ်က ဈေးမှာ ကြက်အရှင်တွေ ဝယ်ပြီး အပြန် တံတားကို ညဘက်ကြီးဖြတ်ရတယ်။ တံတားပေါ်ကနေ ခုန်ချပြီး မိန်းမ တစ်ယောက် ကို သူ တွေ့ ပါရော။ သူဘာလုပ်လဲ ဆိုတော့ ဝယ်လာတဲ့ ကြက်အရှင်နှစ်ကောင် ကို တံတားပေါ်ကနေ ပစ်ချ ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ "တွေ့ လား၊ မိန်းကလေး ၊ မင်းခုန်ချရင် အဲသလို ပဲ သေရမှာ" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ပစ်သာ ပစ်ချရတယ် လယ်သမားလေးဟာ အိမ်မွေးကြက်တွေကို အရမ်းသနားတတ်တယ်။ အိမ်မွေးကြက်တွေဟာ တခြားသတ္တ္တဝါတွေလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် မခုခံနိုင်ဘူး။ venerable အရမ်းဖြစ်တယ်လို့ သူယုံထားတာကိုး။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံး ကို Chi က တခြားနတ်တွေကို လိုက်ပြောပြ တယ်။ ...more
Aug 10, 2019 12:06PM · 1 like · like · see review · preview book
More of Zawhtut's books…
“You can’t make someone do something they don’t want to, but if you are kind about it, you can convince them to do the right thing, even if they are uncertain what that is.
--Jala, Healer to the House of Soris”
“When I wasaboy, I passedahomeless man, drunk and begging onastreet corner. My father, sensing my disgust, said something I never forgot, that I think of every time I see your face on the news or in the paper- "That man was once someone's little boy.”
“At that point, Noriko finally breaks down and begins to cry sobbing into her hands as the floodgates open - this young woman who has suffered in silence for so long, this good woman who refuse to believe she's good, for only the good doubt their own goodness, which is what makes them good in the first place. The bad know they are good, but the good know nothing. They spend their lives forgiving others, but they can't forgive themselves.”
“We stood and watched as God abandoned us, and then we did the best we could.”
“War is possible because our mothers believe only other women's sons will die”
― Cesar Nascimento
More of Zawhtut’s quotes…
Haruki Murakami fans — 3982 members — last activity Dec 03, 2019 04:46AM
Zawhtut has read2of 20 books.
Zawhtut read 33 books of his goal of 25!
Zawhtut read 24 books of his goal of 20!
Zawhtut’s Year In Books
Zawhtut’s 2018 Year in Books
Takealook at Zawhtut’s Year in Books. The good, the bad, the long, the short—it’s all here.
See Zawhtut’s 2018 Year in Books
Zawhtut’s Friends (104)
128 books | 88 friends
349 books | 161 friends
766 books | 165 friends
2,072 books | 787 friends
364 books | 253 friends
60 books | 102 friends
People Zawhtut is Following
1 person is following Zawhtut
Zawhtut’s Favorite Authors
24 books — 769 voters
333 books — 463 voters
Polls voted on by Zawhtut
Lists liked by Zawhtut